Ahoana ny nanaovana ny tavoahangy fitaratra?
Ny dingana famokarana tavoahangy vera dia misy ny: ① lamin'aretina alohan'ny fanodinana. Kapohina ny akora vita amin'ny mason-dranomasina (fasika quartz, lavenona soda, limestone, feldspar, sns) mba hamafana ny akora mando, ary esory ny akora misy akora misy rano hiantohana ny kalitao. ② Fanomanana ny ...
Pickles ny fitahirizana lava na tavoahangy tavoahangy dia tena mety
amin'ny admin amin'ny 19-12-11
Tavoahangy pickle, raha ny hevitry ny olona maro dia matetika mifehy ny tavoahangy snack an-tanàna. Taloha, tanimanga toy ny tavoahangy voafidy pickle, dia ilaina ho an'ny fianakaviana tsirairay. Amin'izao vanim-potoana izao, miaraka amin'ny haingam-piainganana haingana dia nanomboka niditra tao amin'ny supermarket ny pills, hiditra ny ...
amin'ny admin amin'ny 19-12-10
Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD. dia orinasa mpanamboatra izay manam-pahaizana manokana amin'ny famoronana tavoahangy tavoahangy, famokarana teknolojia, vokatra fitaratra borosilika avo. Ny orinasa miaraka amin'ny rano, fitaterana an'habakabaka ary rivotra, akaikin'ny seranan'i Lianyungang. Manana 5 otomatis p ...
Ny famokarana tena lehibe
Ny orinasa anay dia mamokatra karazan-java-dehibe 800 mahery: tavoahangy tantely, tavoahangy vera, tavoahangy vera, tavoara soja, tavoahangy, tavoahangy oliva, tavoahangy, tavoahangy divay, tavoahangy vera, tavoahangy vera masaka, tavoahangy furu tavoahangy, tavoahangy divay, divay ara-pahasalamana bot ...